IATA dia manohana ny Certificate Digital COVID Eoropeana ho fenitra manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » IATA dia manohana ny Certificate Digital COVID Eoropeana ho fenitra manerantany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny DCC dia natolotra nandritra ny fotoana fohy mba hanamorana ny fisokafan'ny fanjakana Eoropeana hitety faritra. Raha tsy misy fenitra tokana manerantany momba ny mari-pahaizana momba ny vaksinina dizitaly, dia tokony ho toy ny drafitra ho an'ny firenen-kafa mitady hampihatra mari-pankasitrahana momba ny vaksiny niomerika izy io mba hanamorana ny fivezivezena sy ireo tombontsoa ara-toekarena mifandraika amin'izany.
Ny EU Digital COVID Certificate dia manana fahalalahana ampiasaina amin'ny endrika taratasy sy nomerika.
Ny kaody QR Digital COVID Certificate QR dia azo ampidirina amin'ny endrika niomerika sy taratasy.
Ny mari-pahaizana EU Digital COVID dia ampiharina amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny EU 27.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia nidera ny vaomiera eropeana noho ny fitarihany sy ny hafainganan'ny famoahana ny taratasy fanamarihana COVID Digital Digital (DCC) ary nanentana ny fanjakana izy ireo mba hanao azy io ho fenitra manerantany momba ny mari-pahaizana momba ny vaksinina nomerika.
Conrad Clifford, tale jeneraly lefitra IATA
"Ny DCC dia natolotra an-tsoratra mba hanamorana ny fisokafan'ny fanjakana eropeana hanao dia lavitra. Raha tsy misy fenitra tokana manerantany momba ny mari-pahaizana momba ny vaksinina dizitaly, dia tokony ho rafitra ho an'ny firenena hafa mitady hampihatra mari-pankasitrahana momba ny vaksiny niomerika izy io mba hanamorana ny fivezivezena sy ny tombontsoa ara-toekarena mifandraika amin'izany, "hoy i Conrad Clifford, IatăTale jeneraly lefitra.
Ny DCC EU dia mahafeno fepetra lehibe sasantsasany izay nofaritana ho manan-danja raha toa ka te hahomby ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny niomerika:
Format: ny DCC dia manana ny malefaka hampiasaina amin'ny endrika taratasy sy nomerika.
QR code: Ny kaody DCC QR dia azo ampidirina amin'ny endrika nomerika sy nomerika. Izy io dia misy fampahalalana tena ilaina ary koa sonia nomerika mba hahazoana antoka fa marina ilay fanamarinana.
Fanamarinana sy fanamarinana: Ny Vaomiera Eoropeana dia nanamboatra vavahady iray izay ahafahana mizara eraky ny EU ny angon-drakitra voafafa ampiasaina hanasoniavana DCC ary takiana hanamarinana ireo sonia fanamarinana. Ny vavahady dia azo ampiasaina hizarana angon-drakitra voafafa amin'ny mpamoaka fanamarinana hafa tsy EU. Ny EU koa dia namolavola famaritana fitsipika momba ny Validation azo vakiana amin'ny milina amin'ny dia an-tanety.
Ny DCC EU dia ampiharina ao amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny EU 27 ary fifanarahana nifamaly maromaro no nifanarahana tamin'ny mari-pankasitrahana vaksinin'ny fanjakana hafa, anisan'izany i Soisa, Torkia ary Ukraine. Raha tsy misy fenitra tokana manerantany momba ny mari-pahaizana momba ny vaksiny niomerika, dia firenena 60 hafa no mitady hampiasa ny famaritana DCC ho fanamarinana azy ireo. Ny DCC dia maodely tsara satria mifanaraka amin'ny Torolàlana farany an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ary tohanan'ny IATA Travel Pass. Tombontsoa iray hafa an'ny DCC ny famelana ny tompony hiditra amin'ireo toerana tsy misy fiaramanidina any Eropa izay mila porofon'ny vaksiny, toy ny tranombakoka, hetsika ara-panatanjahantena ary kaonseritra.
IATA dia maniry ny hanolotra ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny Vaomiera EU sy ny fanjakana liana hafa mba hampiditra bebe kokoa ny DCC amin'ny fizotry ny seranam-piaramanidina ho an'ny traikefa mpandeha azo antoka sy tsy misy tohika, toy ny fanohanana amin'ny famoahana data momba ny tena manokana.